Chinese mauto anopa zvakawanda zvekurapa kubatsira Laos kurwisa COVID-19
ne admin pane 2021-04-24
Musi waZvita 17, 2020, gore rechimakumi mashanu rekugadzwa kwehukama hwehukama pakati peChina neEthiopia rakaitirwa zvine mutsindo muShanghai. Seimwe nhengo yebhizinesi yeShanghai International Chamber of Commerce, kambani yedu yakakokwa kuti itore chikamu muchiitiko ichi ....
UP Boka pane Zvese Mukudhinda China 2020
Vadiwa shamwari dzese, 2020 Zvese muPrinta zvapera zvinobudirira. Munguva yekuratidzira, yedu yemadhijitari kudhinda uye yekucheka machineres yakadhonza vateereri vazhinji, tinokutendai zvikuru nekuuya kwedu Tese tinoziva kuti 2020 igore rakaoma, irukudzo rwedu rwakakura kuchinjanisa t ...
LQ6090 / 9060 UV Kudhinda muchina
ne admin pane 2021-03-24
Q1: Kana usiri kuda kushandisa iyo XP600 yekudhinda musoro, unogona kuichinjira kune yekudhinda anodhinda musoro? A1: Zvino, tinogona kushandisa Ricoh anodhinda misoro uye Toshiba CE4 anodhinda misoro. Q2: kurapa kwakadii kweprinta yako? A2: Isu takawedzera mwenje yeUV kumativi ese emusoro wekudhinda, inogona kuwana kurapa nekukurumidza. Q3: Whe ...
LQGA T-shati purinda
Q1: Hembe dzese dzinoda kumwayiwa nemushonga wemvura here? A1: T-shirts chena haidi kuti ishandiswe nemushonga wemvura, asi mavara akasviba anofanirwa kunge akaita se: girini, tsvuku, nhema, nezvimwewo Q2: T-shirt printer inogona kupurinda micheka yakasiyana? A2: Kunyanya kupurinda donje T-shirts, iyo yakakwira iyo ...
Musiyano uripo pakati pekudhinda kwedigital uye kudhinda kwetsika
Pasuru uye kudhinda inzira dzakakosha uye nzira dzekuvandudza iyo yakawedzera kukosha kwezvigadzirwa uye kusimudzira kukwikwidza kwavo. Seyakagadzirwa tekinoroji yekuteedzera uye kunyora, yakagadzira nekukurumidza nemabatiro ehunyanzvi hwekugadzira uye yave chikamu chakakosha chehupenyu hwedu. Zvino ...
Pfupiso yezvinetso zvakajairika zvemuchina wemakatoni
Mubvunzo: 1. Ndeupi musiyano uripo pakati pedu katoni inkjet purinda uye yechinyakare? A1: Hatidi kugadzira ndiro uye kusanganisa inki senge yechinyakare kudhinda. Yedu inki yakasvibira uye zvakatipoteredza Q: 2. Ndeupi musoro wekudhinda unoshandiswa nemuchina uye hwakareba sei hupenyu hwaro hwebasa A2: Inotora ini ...
RFID chigadzirwa sumo
RFID ndicho chidimbu cheRadio Frequency Chitupa. Icho chirevo ndechekusaita-kutaurirana kwedata pakati pemuverengi uye tag kuti uwane chinangwa chekuziva icho chakanangwa. RFID ine akasiyana maficha. Chaizvoizvo zvinoshandiswa zvino zvinosanganisira mhuka machipisi, mota chip inopokana-th ...
ZH1000D otomatiki dhairekitori gluer kuyedzwa
Musi waNovember 10, Mutevedzeri GM Mr. Gao akashanyira fekitori yedu kuyedza ZH1000D CHIMWE CHINOKOSHA CHINOKOSHA CHINOGONESA uye vakaita hurukuro yakadzama nenyanzvi uye vatengi.
Ngatirwisane ne COVID-19 pamwechete
China inodzokera kubasa: Zviratidzo zvekudzoreredza kubva kuCoronavirus Logistics: kuenderera kwakanaka kwemaitiro emidziyo Iyo indasitiri yezvigadzirwa iri kuratidza kudzoka kweChina kubva kuCoronavirus. Muvhiki yekutanga yaKurume, maChinese chiteshi aive ne9.1% j ...
UPG timu yakapinda muLabel Expo South China 2020
Zvita.8th-12th, UPG timu yakapinda muLabel Expo South China 2020. Munguva yechiratidziro, takaita furthur kudzidza kweangwara chitaridzi uye kudhinda kubva19 chitambi nyanzvi uye maindasitiri izvo zvinoita kuti tijekese zvakanyanya nezve ramangwana maitiro ekuvandudza chitambi pamwe ne digital ...
UP Boka rakapinda muChina Plastics Expo yakaitirwa muYuyao
China Plastics Expo (Yakapfupikiswa seCPE) yakaitwa zvakabudirira kwemakore makumi maviri nerimwe kubvira 1999 uye yakave imwe yeanonyanya kuratidzwa uye ane mukurumbira kuratidzira muChinese epurasitiki indasitiri, uye yakaremekedza iyo UFI certification muna 2016. Iyi hongu ...
Yechisere Yese muPrinda China iri kuuya! Ona iwe kuBooth: N3B331 & N2B433
Zvese muPrinta China 2020 zvichaitirwa zviripo kuSNIEC, Shanghai, China Gumiguru 12-16, 2020. Zvese muPrinta Cloud inosanganisa mharidzo, matchmaking uye indasitiri yekuchinjana mabasa, ese akapihwa angangoita, kutanga Nyamavhuvhu 10. Booth No. N3B331 Dhijitari kudhinda. michina ...